Kungani Okuhambayo ngu zemininingwane Ingabe Uyezwana Nemvelo | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ukuhamba Ngezitimela > Kungani Okuhambayo ngu zemininingwane Ingabe Uyezwana Nemvelo
izitimela iyona kakhulu indlela imvelo-friendly ukuhamba. Isivuvu ka amagesi ikhilomitha ngalinye ku ujantshi zokuhamba 80% esingaphansi izimoto. Kwamanye amazwe, ngaphansi kwe 3% kuzo zonke ezokuthutha amagesi zivela izitimela. Izindlela kuphela imvelo kuka izitimela esihamba futhi ngebhayisikili. Lapho kuthiwa izizathu eziningi zokuthi kungani ukhetha ukuhamba ngesitimela kahle imvelo futhi singathanda ukwabelana ngalezi nawe!
Ukudla okuvamile isitimela umugqa okuthwala 50,000 abantu ngehora. Qhathanisa lokhu nge kwindlela onguthelawayeka, ezingasetshenziswa ukuhambisa kuphela 2,500 abantu ngehora.
Okuthunyelwe okwabiwe nguNigel C Williamson (@nonhlanhla_Nox)
Lapho eqhathanisa motor ezokuthutha nge wesitimela, izindleko zangaphandle, umsindo, ukungcoliswa komoya, izingozi, nengqalasizinda ukuwohloka, nokucinana aphansi kuze ku izitimela kuka usebenzisa imoto yangasese.
ongcolile nomsindo – Kungani ukhetha ukuhamba ngesitimela kahle imvelo
Ukungcoliswa komsindo kungumphumela omubi womsindo kubantu nakubantu izilwane. Kuyinto, umphumela walo oqondile abampofu ukuhlela zasemadolobheni. Izinkinga kusuka ongcolile nomsindo usuku wabuyela eRoma lasendulo! Namuhla, ongcolile nomsindo kusuka izimoto kungabangela ukulimala isimo abantu ngokwengqondo. Izimpawu zihlanganisa umfutho ophakeme wegazi, amazinga aphezulu-ukucindezeleka, tinnitus, ukuphazamiseka kokulala, neminye imiphumela eyingozi.
okwamanje, zikhona izinyathelo ukuze kukhawulwe umthelela umsindo endleleni. izinyathelo zihlanganisa umsindo izithiyo, nokukhawulela ngesivinini imoto, ekushintsheni endleleni ukuthungwa, kanye nezilawuli traffic ezenza bushelelezi imoto ukugeleza. Lokhu kusho ukuthi izimoto ohlelweni control traffic Uzodinga ukusebenzisa amabhuleki abo futhi ukusheshisa kancane.
Isitimela imvelo nokuthi kubalulekile. India ezibonayo yokuthengisa izimoto okwandisa ngokonyaka. China Kubikezelwa ukuba 300 nezimoto eziyizigidi endleleni 2030. Aviation futhi umkhumbi travel nazo ngokungeza womhlaba CO2 kwekhabhoni. Kubonakala sengathi kuzo zonke izindlela zezokuthutha, izitimela kuphela ezigcina ukuphuma kwezinga eliphansi kanti esimeme ngekusasa.
izimoto kagesi kanye Hybrid ngokusobala kangcono kakhulu emvelweni kunamandla izimoto ezivamile, kodwa inkinga namuhla ukuthi lezi zimoto ebiza kakhulu ukuthi athengiselwe ezingeni ukuthi ezolinganisa phandle la imiphumela emibi izimoto.
izitimela Udizili nezitimela kagesi
Kukhona umehluko phakathi diesel izitimela kagesi izitimela. izitimela kagesi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana 20-35% icarbon encane kunezitimela zikadizili. A isitimela imvelo izitimela Electric ikakhulukazi ukuthi anikwe amandla ophinde uvuseleleke futhi sipho kulolu hambo carbon-free. Emissions ezivela izitimela eYurophu kuzonciphisa ngumuntu okwengeziwe 50% ngu 2030. Lezi zibalo ezinkulu kusukela akhawunti izitimela ngoba 8.5% ka wonke umsebenzi travel.
Okuthunyelwe okwabiwe nguDave Wheeler (@davewheelerstudio)
Izitimela noma izindiza – kungani ukhetha ukuhamba ngesitimela kahle imvelo
Into ebalulekile ebalulekile lapho Ngokuqhathanisa izitimela ukuba izindiza wukuthi izindiza kudingeke usebenzise Kusaphazwa fuel kokubili ukusuka kanye kokwehla. Futhi, lapho abantu ukuhamba ngendiza, ithambekele ukuya esikhumulweni sezindiza ngemoto. Lokhu kunezela amagesi CO2 lwendlela. Lokhu kwenza kuthatha kwamadolobha isitimela akukho-brainer imvelo.
Sekuke kwaba khona intuthuko eyenzekile muva, ikakhulukazi kubantu ukuhamba ibhizinisi ngubani zisuselwe bezohambo we-carbon umthelela izindiza zabo. Futhi, ngaphandle imvelo, kunzima kakhulu ukukwenza finyelela ezikhungweni zedolobha ngemoto, kuyilapho, uma esitimeleni, une ukufinyelela ngqo izikhungo wedolobha. Lokhu, ezikhathini eziningi, kuphinde kusho ukuthi isheshe ngihambe ngesitimela kunanoma iyiphi enye indlela.
Ekuphetheni, isitimela sinobungani emvelweni futhi siyindlela evumelana kakhulu nemvelo yokuhamba futhi sinikeza lula abantu abahambela kokubili ibhizinisi nobumnandi. Ukwanda izimoto emgwaqweni kusho ukuthi ukuminyana nokungcoliswa kukhona udlondlobala nezitimela kukhona impendulo ezokuthutha ukuvikela imvelo.
Ingabe ufuna yokuthenga amathikithi esitimela kungabikho Imali yokubhuka? Iya ku www.saveatrain.com ukuze uthole ukufinyelela eshibhe isitimela amazinga.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha fr ukuze uyeke noma kanye ngezilimi ezingaphezu.
#kagesi imvelo Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Izikhangibavakashi